Qalabka AMP oo leh AMP slider - SO
AMP plugin oo leh AMP carousel slider
AMP sliders carousel slider ayaa si otomaatig ah looga abuuray dhammaan sawirada ku jira aagga qoraalka maqaalka (aagga 'itemprop = articleBody' ).
<amp-carousel> -Slider isdhexgalka
Soo-saareyaasha Bogagga Mobilada ee Degdegga ah wuxuu si otomaatig ah u abuuraa AMP carousel isagoo adeegsanaya sumadda 'amp-carousel' haddii uu jiro wax ka badan hal maqaal maqaalka!
Carousel-ka AMP wuxuu badalayaa sawirka maqaalka caadiga ah ee ku yaal bogga AMPHflix.
Halkii laga heli lahaa carousel -ka AMP, kaliya sawirka maqaalka fudud ayaa la soo bandhigaa ama aagga ayaa si fudud u madhan.
Sawirada ku jira AMP carousel waxaa lagu siiyaa cinwaan. Astaamaha tagta 'alt =' iyo 'cinwaan =' waxaa laga soo qaatay bogga asalka ahaan qoraal ahaan. Haddii astaamahan aan lagu qeexin bogga asalka ah, Generator-ka Degdegsan ee Mobilada wuxuu adeegsadaa sumadda <maqaalka> maqaalka